Iintsapho kunye neenkcubeko: zahlukile kodwa ziyafana | Oomama Namhlanje
UAna L. | 15/05/2021 12:00 | Intsapho
Ngethamsanqa siphila kwiplanethi etyebe kakhulu kwiinkcubeko, nakwiintsapho, apho abantu bazihlela ngokwahlukeneyo. Ngaphandle komxholo wosapho, uqondwa ngokwahluka kwawo, kunjalo zikhona uninzi lwazo. Ukongeza, ayingombono ozinzileyo, kodwa uguqukile ngokweemeko, iindawo kunye namaxesha apho ikhoyo.
Kweli nqaku siza kuthetha ngendlela olutshintshe ngayo uluvo losapho, i Iindidi ezahlukeneyo, nganye kuzo isuka kwinkcubeko eyahlukileyo, kwaye kwinxalenye yehlabathi. Kwaye siza kuthetha nangokwahlukileyo kwinkcubeko yethu! Konke oku ngoSuku lweHlabathi lweeNtsapho.
1 Yintoni usapho?
2 Usapho uNayar, uCaiapú kunye neTojolabales
3 Zinjani iintsapho kwezinye iindawo zaseTshayina naseNepal?
Phambi kokuba uqhubeke ukukunika imizekelo yeentlobo ezahlukeneyo zeentsapho ngokwenkcubeko yazo, masithethe malunga nokuba luyintoni usapho. Usapho ngu iqela labantu elidityaniswe sisalamane. Le manyano inokubangelwa kukuba kukho amaqhina egazi okanye ngenxa yokuba kukho ikhonkco elisekwe ngokusemthethweni nangokwasekuhlaleni. Le yimeko yomtshato okanye yokwamkelwa komntwana abengowomnye umntu okanye abantu ngokusemthethweni.
Nangona kunjalo, olu luhlu lunokuthiwa luphelelwe lixesha. Kwaye okwangoku, umxholo wosapho uyaqondwa ngokubanzi, ikwanjalo indawo apho umntu eziva ekhathalelwe, ngaphandle kwesidingo sokuba nolwalamano okanye ulwalamano ngqo.
Masithi kwimivumbo ebanzi sinokuthetha ngayo umzali omnye okanye iintsapho ezinomzali omnye, iintsapho ezihlanganisiweyo, okanye iintsapho ezikhulisa abantwana. Kukho ezahlukileyo Iiklasi zeentsapho kwaye into ebalulekileyo ngumanyano phakathi kwamalungu alo, intlonipho kunye neyantlukwano. Kwaye akufuneki silibale ukuba usapho luyaqhubeka nokuba sisiseko semfundo kunye neenqobo ezisemgangathweni.
Usapho uNayar, uCaiapú kunye neTojolabales
AmaNayar luluntu oluvela kunxweme lwaseMalabar eIndiya. Kubo kukho isiko okanye umtshato wesiko, kodwa ngumsitho apho indoda nomfazi abatshatayo abanazimbopheleleko komnye nomnye. Ngapha koko, utata, umama nabantwana akufuneki bahlale kunye. Abasetyhini banokuba nabayeni abathathu ukuya kwabasi-3 kwaye onke amadoda ayabaqonda abantwana bomfazi.
ECaiapú, eBrazil, kusapho kukho utata, umama, abantwana, ootatomkhulu noomakhulu, oomalume kunye nabazala. Oku kubizwa ngokuba lusapho olwandisiweyo okanye olwandisiweyo. Kolu hlobo losapho abantwana babiza onke amabhinqa ahlobene nabo mama. Oko kukuthi, oko sikubiza ngokuba ngumakazi okanye umakhulu, bakwabiza umama.
IiTojolabales zihlala kwilizwe laseChiapas, eMexico. Bayakujonga oko bonke abantu bayazanaKungenxa yokuba bangabedolophu enye yiyo loo nto besenza usapho olukhulu. Ukongeza kubantu ekuhlaleni, bakwayinxalenye yosapho: utata ongunaphakade, utata osele ekhulile, njengoko bebiza iLanga noMama woMhlaba.
Zinjani iintsapho kwezinye iindawo zaseTshayina naseNepal?
I-China ihlala itsala umdla wethu, ngenxa yokwahluka kwenkcubeko yayo kunokwethu, kwaye kwimeko yosapho ayinakuba ncinane. E-China, ngokwesiko, amanye amaqela aqwalasele amalungu osapho kubantwana, abazukulwana, abazukulwana babazukulwana. Isiko lalikukuba bahlala bonke kunye, umfazi wayishiya indlu waya kweyomyeni, kwaye indoda endala yayiyintloko yosapho.
Kumantla eNepal polyandryOko kukuthi, umfazi ongatshatanga unokutshata ngaphezulu kwendoda enye. Kuvumelekile ukuba abafazi batshate amadoda amabini nangaphezulu, okoko bengabantakwabo bentsapho enye. Ayisiyonyaniso le eNepal, kodwa i-anthropologists zichonge imibutho engama-53 engeyiyo iklasiki ekwayisebenzisa ipholandry.
Okokugqibela, sifuna ukukuxelela lonto azikho ezinye iintsapho ezifanelekileyo kunezinye, kwaye akukho ndlela inye yokuququzelela usapho. Zonke zingumthombo ophambili wentlalontle yomntu ngamnye, kwaye ziya kuba nefuthe kuye nawuphi na umntwana, naphina emhlabeni, xa kuyilwa ubuntu babo kunye nokuziphatha njengomntu omkhulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Oomama Namhlanje » Intsapho » Iintsapho kunye neenkcubeko: zahlukile kodwa ziyafana